Ulahlwe yicala umshayeli wemoto eyashayisa yabulala ababili | News24
Ulahlwe yicala umshayeli wemoto eyashayisa yabulala ababili
eThekwini - U-Omesh Ramnarain ulahlwe yicala lokubulala ngokungenhloso ngengozi eyadlula meniphefumulo yababili abebehamba ngamabhayisikili.
Lengozi yenzeka ku-M4 ngaseThekwini ngoFebhuwari 2016.
Lo mlisa okunguyena owayeshayela imoto eyashayisa laba bobabili uzogwetshwa ngenyanga ezayo, kanti iMantshi yeNkantolo yesiFunda eThekwini u-Anand Maharaj uyelulile ibheyili ka-R10 000 eyakhokhwa wumsolwa.
Ubeke imigomo yokuthi kumele anikele ngezincwadi zakhe zokushayela ngemuva kokukhishwa kwesinqumo sokutholakala enecala.
OLUNYE UDABA: Kushone 4 wabantu kusha umjondolo eGoli
Kuthiwa uRamnarain wayesuka ekilabhini ngo-05:00 ekuseni ehamba ngesivinini esiphezulu ngesikhathi eshayisa uJarred Dwyer noRichard da Silva, abebehamba ngamabhayisikili.
UMbuso uveze ukuthi lo mlisa wayephuze amanzi amponjwana nesikhathi kwenzeka le ngozi, yize yena ethi wayephuze ama-Hunters Gold amane nje vo ngalobo busuku ngakho-ke wayengadakiwe ngesikhathi eseshayela.
Ofakazi abambalwa batshela inkantolo ukuthi umsolwa wayenuka phu utshwala ngemuva kwale ngozi kanti ngesikhathi kuhlolwa igazi lakhe ngemuva kwamahora amabili kwenzeka le ngozi kwatholakala ukuthi wayenotshwala obuningi kakhulu egazini.